Ukuqonda Izimali zommeli we-UAE Izimali Nezinsizakalo Zomthetho - Imithetho Yezomthetho Dubai
Ukuqonda ummeli we-UAE Imali Yokukhokhela Imisebenzi Nezomthetho
1 Comment / ummeli, I-Business Law, imithetho yamafemu / By Sarah
Ngesinye isikhathi ebhizinisini noma ezimweni zomuntu siqu, lapho iklayenti noma abahlinzeki bakho besongela ukubiza ummeli wabo nganoma yiluphi udaba lwezomthetho, Ngakho-ke kungenzeka ube nommeli noma ummeli wezomthetho "ekugcineni." Ukuba nommeli ekugcineni umthwalo kusho ukuthi iklayenti ikhokha ummeli we-UAE imali encane yokukhokha njalo. Ngokubuyisela, ummeli wenza izinsizakalo ezithile zomthetho noma iseluleko sezomthetho noma kunini lapho udinga usizo lwazo. Yilokho okugcina incazelo noma incazelo yokugcina. Ukuba nabagcini babasiza kakhulu ebhizinisini abadinga umsebenzi wezomthetho oqhubekayo, kodwa abanayo imali eyanele yokuqasha ummeli waseDaibul isikhathi esigcwele.
Kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele uthintane nommeli. Kodwa ngaphambi kokwenza lokhu, kufanele uqiniseke ukuthi unecala. Kuzoba nezikhathi eziningi, noma kunjalo, uma ungaqiniseki futhi kulungile ukubuza eyodwa. Kodwa kufanele ube nento eyodwa engqondweni yakho; kubalulekile ukuthi usebenzisane nommeli wakho futhi uyamethemba. Kokubili iklayenti nommeli kufanele basebenze njengeqembu uma befisa ukuthola imiphumela emihle.
Lezi zingase zibizwa kalula ngokuthi izinkokhelo eziphindaphindiwe ezenziwa ezinkonzweni zommeli. Ngokuyinhloko unikeza ummeli umqondo wokuzethemba ukuthi uzokhokhelwa ngokuqinisekile izinsizakalo abanikezayo. Kuzoze kube nini abalondolozi behlala? Izivumelwano zokugcinwa kwezivumelwano zihlala unyaka.
I-UAE ingenye yezindawo eziyinhloko lapho ama-firms asemthethweni kakhulu ziyatholakala. Uzothola amafemu asemthethweni kakhulu avela emhlabeni wonke avula ihhovisi noma amabili kule ngxenye yomhlaba futhi. Ngokwemvelo ke, izindleko zizophakama kakhulu. Imali yokugcina imali yinto abameli be-UAE abazimisele ngayo. Nakuba ungathola izindawo eziningi ezingeke zenze izidingo ezinjalo, kuningi okuqinisekisa ukuthi lemali ikhokhwa ngaphambi kwanoma yiziphi izinsizakalo ezinikezwayo. Abameli bezakwethu bakhokhisa iningi elilandelwa abaphezulu. Kodwa-ke, kufanele kuqaphele ukuthi ngisho nalabo abasebenza nje njengabasizi bezommeli bakhokha okungenani inani eliphansi. Izinkampani eziningi ziqinisekisa ukukhanya okucacile futhi yingakho amaklayenti abesabi ukwenza lokhu kutshalwa kwezimali. Ukuchazwa okucacile kunikezwa ukuthi kuyophi imali nokuthi uzosetshenziswa kanjani. Uma kukhona izindleko ezengeziwe eziphakama kunoma yikuphi, amaklayenti atshelwa ngesikhathi futhi anikezwa ngezizathu ezicacile.
Amacala anzima angadinga ukunakwa okwengeziwe futhi amacala azokhuphuka ezimweni ezinjalo.
Yenza indlela efanele: Hlangana nommeli wakho
Kukhona njalo indlela enhle nendlela engafanele yokwenza izinto. Kumele uhlangane njalo nommeli wakho ngaphambi kokuba unqume ukuthi kufanele uphathe icala lakho noma cha. Akudingekile ukuba nonke nibe abangane kodwa kubalulekile ukuthi iklayenti nommeli bahlangane. Ukuhlangana nommeli wakho kuzokuvumela wena nommeli ukuba baqonde omunye nomunye futhi baqonde ngempela ukuthi uma usebenza eceleni kungenzeka noma cha. Ukubamba amacala kuvame ukubiza kakhulu futhi awufuni ukuzithola esimweni lapho usuvele ukhokhe imali yokugcina imali futhi ulahlekelwa ummeli wakho noma ungamethembi ngokwanele ukuze uphathe icala lakho. Ungakhohlwa ukumkhokhela ngehora akunike lona.
Uma othile ekutshela ukuthi ukuxoxisana nezinkampani ezisemthethweni ezingasemthethweni ikakhulukazi endaweni efana ne-UAE akuyona inketho, babuze ukuthi bacabange futhi. Ungabatshela ngaso sonke isikhathi ukuthi yini ongayinikeza futhi ulalele lokho okushoyo. Kuyoba khona okuningi okuzoba namakhasimende akwanele futhi angabe cha noyedwa onikeza i-penny ngezansi kwesilinganiso sabo sokufuna. Kodwa futhi, kukhona nalabo abanesihawu futhi abazimisele ukukhula. Bangase bavumelane nesipho esiphansi futhi bajabule ngakho.
I-UAE inezinkampani eziningi ezinhle ezenzeka ukuthi zizohamba phambili emhlabeni. Kunezinkampani zomthetho ezihlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ngokusebenzisa abameli abangezinhlobo eziningi zamasiko nezizinda. Bahlome kahle ulwazi lwezindawo eziningi. Ukuthola ummeli omuhle e-UAE akuyona into enkulu. Uma amapokhethi akho egcwele, uzothathwa kahle. Uzothola nabameli abaningi abavela emlandweni ohlukile futhi bazokwazi ukukhuluma kahle ngesi-Arabic.
Buza imibuzo eminingi bese uzama ukutshela amaqoqo akho ngokuningiliziwe ukuze ummeli azi kahle yonke into ngaphambili. Noma yikuphi okumangazayo uma icala liye laqhubeka alitholakali yi-firm firm e Dubai e-UAE.
Iseluleko esifanele sezomthetho: ingabe kukhona e Dubai?
Kukhona izinkampani ezinhle e-UAE ezizimisele ukwelulisela ulwazi lwabo kulabo abasha emthethweni womthetho futhi kungenzeka ukuthi abanakho imali ezandleni zabo ngokushesha. Bavumela amaklayenti ukuba babelane ngokuhlukumeza kwabo futhi baxoxisane yonke imininingwane ukuze bakwazi ukuthola ukuthi banesimangalo noma cha. Uma lokhu sekuqedile, bangawacebisa ukuba baqashe ummeli ofanele futhi baze baqondise ngokuphathelene nezindleko ezizohamba nazo zonke lezi zinto. Cela ukuthi usithumelele izidingo zakho zesivumelwano Sokugcinwa Kwezimpahla ngokuchofoza lapha noma Isicelo somhlangano ukuze uxoxe ngokuqhubekayo.
Umcabango ongu-1 mayelana "Ukuqonda Imali Yommeli we-UAE Imali Yezimali Nezinsizakalo Zomthetho"
Idokhumenti evumelwaneni kuphela okuvunyelwene ngayo manje ifomu lokubhuka elisayinwe elithulisiwe ku-VAT. Ngiyaqonda ukuthi unjiniyela kufanele axoxisane nami ngaphambi kukaJan. 01, i-2018 ngentengo echazwe kuyo, ukuthi ayizange iyenze futhi intengo kuFomu Yokubhuka iqinisa, ngokufanele.
Okwesibili, umthuthukisi uyangicela ukuba ngiyikhokhele Imali Yokubhalisa nge-DLD, ngokushesha, uma kungenjalo kuyoba nenhlawulo futhi ngizobe ngiyothola inkokhelo. Ikhuluma ngesaziso se-DLD mayelana nomhla wokugcina wokubhalisa ka-June 25, i-2015 ngesi-Arabhu (ikhophi enamathiselwe). Ngiyaqonda ukuthi usuku lwe-SPA olusayinwe luzocatshangwa usuku lokuthenga lokubala kwezinsuku zokulibaziseka ekwenzeni isicelo sokubhalisa nge-DLD.